Anigu waxaan jiraa 16 waxaana u sheegay saaxiibadayda in aan khaniis ahay. Hadda inbaddan oo wiilasha kamid ahi ma doonayaan in ay saaxiibo ila noqdaan. Qaarkoodna waaba kuwo aad xaasidiin u ah. Maxaan sameeyaa? – Tips for refugees
Anigu waxaan jiraa 16 waxaana u sheegay saaxiibadayda in aan khaniis ahay. Hadda inbaddan oo wiilasha kamid ahi ma doonayaan in ay saaxiibo ila noqdaan. Qaarkoodna waaba kuwo aad xaasidiin u ah. Maxaan sameeyaa?
In aad u sheegtid saaxiibadaad arintaasi waxaa lagu magacaabaa ‘banaan usoo bixid’.
Arintaasi waa mid wanaagsan oona aad geesinimo u ah!
Inbaddan oo kamid ah dhallinyarada waxay ka baqaan in ay banaanka usoo baxaan.
Waxay ka cabsadaan in laga diido dhinaca waalidiintooda ama saaxiibadooda.
Nasiib daro, midaan waa xaaladaha intooda baddan.
Welina waxaa jira dad ku xukumaya.
Midaan waa arin aad murugo kuugu leh adiga iyo muraal jab.
Si kastaba, waxaa jira dad baddan oo maskax-furan – kaliya waa in aad adigu raadisid.
Waxaa jira wiilal baddan oo jacayl u qaada wiilasha!
Inta baddan waxaa wanaagsan in aad kala hadashid wiilal kale oo khaniisiin ah.
Waxaad ka heli kartaa kooxo dhallinyaro adiga kuu dhow halkan:
Halkaas waxaad ka heli doontaa dad ku fahma.
Sidoo kale halkaasi waxaad ka heli kartaa saaxiibo cusub.
Sababtoo ah adiga waxaad ku FIICANTAHAY sida aad tahay!
Waxaa jiri kara qof dhigta iskuulkaaga midkaas oo ku caawin kara.
Sidoo kale waxaad caawimaad ka heli kartaa xarunta talada:
beratung@gladt.de: halkan waxaad ka heli kartaa caawimaad ku qoran luuqadahaan soo socda: Jarmal, Carabi, Turkish, Ingiriisi, Faransiis iyo Kurdish. Luuqado dheeri ah waxaa la helayaa marka la dalbado!
Posted on June 12, 2017 Author editorialteamCategories Help - Hilfe
Previous Previous post: Ilmo adeertaydu waa 15 sanno jir oona guursatay. Wakhti dhow ayay waxay Jarmal la timid ninkeeda (25 sanno jir ah). Guurkaasi halkan laguma aqbalin. Sabab loo diiday?
Next Next post: Waxaa jira xuquuqo gaar ah oo loogu talogalay carruurta halkan Jarmalka. Maxaa laga wadaa midaasi?